Sida loo beddel ID3 Tags for Your Music Library
> Resource > Download > Sida loo beddel ID3 Tag for Your MP3 Faylal ay si sahlan
File MP3 An ka mid ah ma ahan oo keliya wadada dhabta ah, laakiin sidoo kale kale warbixin-ID3 tag-gabaygii, sida magaca, artist, farshaxanka album oo dheeraad ah. Waa muhiim in tag ID3 noqon sax ah oo ku habboon, haddii kale Lugood ama software kale music laga yaabaa in aanay awoodin inay kala soocaan oo kala maamuli songs si sax ah. Nasiib wanaag, ma ahan adag tahay in la beddelo tag ID3 u MP3 (ama M4A) fayl iyadoo la kaashanayo ku TidyMyMusic Wondershare u Mac ( Wondershare TidyMyMusic ), kaas oo ah qalab dhan-in-ka mid ah iyo tags ID3 la socosho in MP3 files heli. Intaa waxaa dheer, waxa ay keeneysaa in xaalkaa tag ID3 adigu by. Ma sugi karo in aad iska baarto? Just hesho barnaamijka iyada oo xiriir ah dajinta hoos ku qoran oo la raaco tutorial ah oo faahfaahsan.
Burcad barnaamijka dib markii la rakibey. Sida ugu dhakhsaha badan u furmay, waa iskaan doonaa maktabadda Lugood iyo darto heesaha oo dhan ku.
Fiiro Gaar ah: Waxaa laga yaabaa inaad music ka badan ma maamula Lugood. Si aad u dajiyaan songs kuwa, waa in aad u tagto oo eynaan Music loo sameeyo keligaa. Just jiidi folder music si ay saxaarad file ama guji badhanka File Open dooro files in lagu daro in saxaarad faylka.
2 ID3 tags songs Raadi
Si aad u hesho ID3 tags in Dufcaddii, tag qaybta madax ka ah barnaamijka iyo heli badhan Scan. Sax checkbox ee Search for Songs Allaha oo guji badhanka Scan, markaa barnaamijkan bilaabi doonaan in ay ka heli ID3 tags u heesaha oo dhan in saxaarad faylka.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad ka heli tag ID3 hal song gaar ah, waa ay fududahay. Dooro song oo guji badhanka Aqoonso on hoose ee khaanadda saxda ah. Markaas sugi habka baadhi ah in la sameeyo, kaas oo noqon doona mid aad u degdeg ah.
3 Change ID3 tags la click ah
Ka dib oo dhan tags ID3 waxaa lagu ogaaday, in aad Cudarada karaa in MP3 files la click ah. Dooro song iyo macluumaadka asalka iyo dhowaan la helay lagu soo bandhigi doonaa khaanadda saxda ah. Haddii aad tahay mabsuud ku saabsan macluumaadka cusub ee laga helay, riix batoonka Codso hoose si Cudarada tag ID3 in ay file MP3 ah. Si ID3 tags badasho dhowr songs, kaliya iyaga doortaan oo guji Codso button khaanadda saxda ah.
Fiiro gaar ah: Qaar ka mid ah yabaa in aad dooneysaan in tags ID3 ka xaalkaa keligaa. Dooro mid ka mid song oo guji icon Edit ku khaanadda saxda ah. Markaas buuxi duurka tafatir sida aad jeceshahay.
Fudud, miyaanay ahayn? Waa in aad kala soo bixi barnaamijka si uu u siiyo shot a. Marna aad hoos ku dayn doonaa.